Tim Cook na-achịkwa mmekọrịta n'etiti iOS na OS X | Esi m mac
Ọtụtụ ndị ọrụ, n'etiti ndị m nọ, na-eche na iPad Pro ọhụrụ nwere ike ịbụ ngwaọrụ iji tụlee n'ọdịnihu, mgbe m ga-emegharị MacBook Air m, ọ bụrụhaala na ejiri ya rụọ ọrụ site na sistemụ arụmọrụ nke ga - enyere m aka ịmekọrịta dị ka OS X, mana na mfe nke iOS. iOS dị ezigbo mma mana m ka na-ele ya anya dị ka ngwaọrụ iji rie ọdịnaya, ọ naghị akwado ọrụ m, m na-ahụ ya ka ọ na-eme mkpọtụ iji dochie laptọọpụ na desktọọpụ dị ka Tim Cook kwuru ụbọchị ole na ole gara aga, tupu mwepụta nke iPad Pro n'ụwa niile.
Mana ụmụnwoke Cupertino ka dị afọ iri na atọ ma kwuo nke a ugbua ọ bụghị na atụmatụ ụlọ ọrụ iji gbanwee usoro sistemụ abụọ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ Microsoft na-eme ya na mbata nke Windows 10 na ngwaọrụ mkpanaka na desktọọpụ na laptọọpụ. Maka Cook, e mepụtara ngwaọrụ abụọ ahụ iji mee ihe n'ụzọ dị iche iche karịa ihe ụfọdụ ndị ọrụ na-atụ anya ya, ọ bụ ezie na iPad Pro ọhụụ yiri ka ebumnuche ya na ngalaba ndị ọkachamara na-ekele ngwa ngwa Apple Pencil ọhụrụ yana keyboard ọhụrụ yana mkpuchi mpịachi. Ọtụtụ benchmark na-atụlerịrị arụmọrụ arụmọrụ nke iPad ọhụrụ ọhụrụ na nsonaazụ ndị enwetara na ụfọdụ ụdị iPad Ikuku site na afọ ole na ole gara aga.
Cook kwuru na:
Anyị kwenyesiri ike na ndị ahịa anyị anaghị achọ Mac na iPad. Nchegbu anyị bụ na ahụmịhe nke onye ọrụ chọrọ abụghị ihe ha tụrụ anya n'ezie. Anyị chọrọ ịnọgide na-abụ eze na ahịa mbadamba ma gaa n'ihu na-ere ọtụtụ Macs, ma ọ bụrụ na anyị dị n'otu, anyị ji n'aka na anyị agaghị aga nke ọma.
Ndị ahịa anyị na-eji sistemụ arụmọrụ eji uru nke njirimara nke ọ bụla na ekele Handoff anyị chọrọ ka mgbanwe site na otu ngwaọrụ gaa na nke ọzọ dị mfe karị.
The okirikiri nke Ntughari iPad n'etiti ndi oru kariri karịa iPhone, belụsọ na isi anyị eji iPad bụ nsogbu ọrụ anyị kwesịrị ịnwe ụdị ọhụụ ọhụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook na-achịkwa njikọta n'etiti iOS na OS X
Nwoke, ihe ha kwuru na 'ndị ahịa ha anaghị achọ Mac na iPad maka ahụmịhe eji'. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ịnye OS X na iPad ọ ga - abụ ahụmịhe ọhụụ yana ihe dị na ya bụ osis OS yana nke Apple jiri nweta aha ọma ọ nwere. M ka na-echeta iPod m na iOS wee hụ na ha etinyela ọrụ ịkpọ na izipu ozi na ya iji sọọ mpi pc n’akpa ha wee kpochapụ ha, OLE. Ugbu a, Microsoft na Lumia kachasị dị na ibu laghachi mana ọ ga-ejedebe ekwentị site na iji ekwentị. Mana ọ bụkwa eziokwu na ugbu a Apple na-enye ahụmịhe ndị a, na-asọpụrụ kpamkpam, mana ọ bụkwa eziokwu na ọ bụrụ na ị nwere iPad Pro na iPhone (iPad Ikuku ma ọ bụ obere, nhọrọ) nke na-ebu iOS na ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ukwuu, ha ka na-adabere na iTunes na ihe ịchọrọ PC ma ọ bụ Mac na n'ezie, ị gaghị azụta MacBook n'ihi na ị nweela ihuenyo nke iPad Pro (ihe kpatara ya bụ ịsị na ọ ga-anọchi ultrabooks na ojiji ha, ị naanị ịlele ndị ọzọ na-emepụta nke na-ahapụ 2 na 1 ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe) ma ị ga-azụta Mac mini ma ọ bụ Mac Pro, OLE, OLE na OLE, iji nwee akụrụngwa dị ike ma nwee ike ijikọ ya TV, nnukwu ọrụ, wdg. ma ọdịnaya dị iche iche sitere na Apple TV iji nwaa gị ịzụta otu. Ọ bụrụ na Apple ndị a nwere echiche ya niile nke ọma, ya mere n'ime afọ ole na ole ha nwere ike ịkpọsa na iOS tozuru oke ma ọ bụ sie ike iji mepụta OS X aka. Luckily ha na ngwaahịa dị mma elu na anyị nwekwara a ngwa ngwa nke ụtọ dị ka hell.